“Boqor Cismaanow Dastuurka Soomaliland Ixtiraam Oo Dadka Iyo Dawladiisa Ha U Kala Turjumin Aflagaadadana Jooji” Cali-Kubad |
“Boqor Cismaanow Dastuurka Soomaliland Ixtiraam Oo Dadka Iyo Dawladiisa Ha U Kala Turjumin Aflagaadadana Jooji” Cali-Kubad
Hargaysa(GNN):-Guddoomiye ku xigeenkii hore ee Komishanka doorashooyinka Qaranka Somaliland, Cali Xasan Cismaan (Cali-Kubad), ayaa Boqor Cismaan Buur-madow, u soo jeediyay in uu ixtiraamo dastuurka dalka oo aanu u kala turjumin dadka iyo dawladooda oo aanu isku qaldin qabyaalada iyo qaranimada, waxaanu si cad u hoga tusaaleeyay in uu ka waantoobo oo joojiyo hadalada xanafta leh ee qabyaalada huwan ee uu ku aflagaadaynayo beelaha, waxaanu u cadeeyay in uu ku ekaado madax dhaqameednimadiisa oo aanu u soo talaabin xayndaabka qaranimada iyo dawladnimada, isaga oo farta ku fiiqay sharaxaadna ka bixiyay baahida weyn ee loo qabo in madaxdhaqamaeedyadan siyaasadu madax martay ay fahmaan qaranimada, waxaanu sidaa ku faahfaahiyay qoraal uu faafiyay barta uu ku leeyahay shabakada xidhiidhka bulshada ee
Facebook-ga. Qoraalkiisaa oo dhamaystiranina waxa uu u dhignnaa sidan.
”Marka aad Dubbe (keliya) uun haysatid, wax kastaaba waxay kuula ekoonaadaan musbaar.
Sidoo kale,qofka aqoontiisu Marka ay ku qotonto qabyaalad waxuu wax walba ku cabiraa qabyaalad. Salaadiintu, waxa fiican inay ku ekoonaadaan arrimaha reeraha iyo qabyaalada. Oo aanay u talaabin xaduuda dawladnimo iyo qaranimo. Qabyaalada iyo qaranimadu waxay isku yihiin cirka iyo dhulka, oo haday qabyaaladu dhulka noqoto, qaranimaduna Waa cirka oo kale. Maaha laba wax oo isku qaldami kara. Maalmahan waxay madax dhaqameedadii reer Somaliland ay caadeysteen inay isku qooshaan qabiilkii iyo qaranimadii. Nin darawal baabuur ahi Ma noqon karo pilot diyuuradeed. Qabiilyahanku Waa darawal baabuur oo kale, qaranyahankuna Waa pilot diyuuradeed oo kale. Sidaas darteed, maaha inay madax dhaqameedyadu ay cirka iyo cimilooyin aanay aqoon u lahayn inna dhex geeyaan.
Qabyaaladu waa dhaqan jaalihi ah, oo ah marxalad ay ummado badani sow mareen boqolaal ama kumanaan sanno ka hor. Waa ta Soomali oo dhan maanta curyaamisey. Qaranimaduna Waa ta ummado badan ka saartay marxalado xun, gaadhsiiseyna inay dayax-gacmeedyo ay u diraan dayaxa iyo cirkaba. Ta kale, qaranimada ku dhisan dimuquraadiyada waxay qof kasta siineysaa inuu caqligiisa uu cabiri karo gar iyo gardarroba!. Qof kasta oo nidaam dimuquraadi ah ku nooli,waxuu u xoryahay noolashiisa,xornimadiisa, iyo hantidiisa( life, liberty, and property). Waxii nabad iyo horumarka wax u geysanaya waxa xaq u leh dawlada inay wajiibkiisa mariso qofkii sidaas isku daya, iyadoo dawladu ay adeegsanayso sharciga distoorku dhigayo.
Waxaan Uga goleeyahay haddii uu Suldaan Sabeyste uu denbi ka galay qaranka, dawlada uun baa xaq u leh inay sharciga kula dhaqanto, iyadoo aanay dawladu siyaasadayn (politicking), oo Marta uun denbiga uu distoorka ka galay, Waa haduuba denbi galaye. Suldaan sabeyste fikirkiisa xaq buu u leeyahay gar iyo gardoraba, waayo dimuquraadiyada baa xaqaa siisey. Waa isaga iyo garaadkiis siduu xornimadaas u isticmaalo!. Laakiin Waxaan meesha qaban Boqor Buurmadow iyo gabayada xajiinta leh ee uu kula dul kufay Ummad dhan oo birmageydadeedii leh. Meel uu ka soo geli karo arrimaha laga tirsanayo dawladana Ma jirto, waayo isagu Waa madax dhaqameed, madax dhaqameedyada kale ula siman dawlada Somaliland. Haday reernimo noqotona annigu Ma garanayo goortaanu meesha qoriga ku qabsanay. Kuwan aad aflagaadeysey Waa kuwii Siilaanyo taageerayey, maalintii aad adigu Garadag joogtey ee aad Siilaanyo diidaneyd, goorma ayey iyaguna shisheeye noqdeen adiguna aad sokeeye Siilaanyo ugu noqotay?
Gabay xajiin Wata oo uu beri hore uu oday xanaaqsani tiriyey, inuu soo galiyo barta FB- ga oo uu cuqdad iyo xumaan jiilka soo socda ku kala dhex dhigo meesha kamaan fileyn, waana ayaan daro weyn. Boqorku uma hadli karo mana difaaci karo dawlada, waayo xil dawladeed Ma hayo, ee waxuu hayaa xil dhaqameed. Dawladana cidna kama xigo, cidna kama laha dawladnimada Somaliland. Intaas waxii dhaafsan waxa loo arki karaa inuu Boqorku wado xasarad weyn, oo aanu daacad ka ahayn daaficida uu dawlada difaacayo. Shakhsiyan waxaan annigu u arkaa, inay kaftan jecelnimo ay boqorka halkaas marisay, oo uu kaftankii suuqa iyo maqaaxiyuhu la taraaray uun, oo aanu ahayn qof calool xun, oo cuqdad dadka qaarkiis ka qaba. Waxaan xasuustaa waqtigii Madaxweyne Rayaale, rag Xaafada ah oo odhan jirey ” dhenged baanu madaxtooyada kaga soo saaraynaa Dahir”. Madax dhaqameedyada reer Awdal marnaba kamaynu maqli jirin gabayo iyo aflagaado ay ku difacayaan Madaxweyne Rayaale.
Markaas Boqor ku ekoonow madax dhaqanimada oo mar danbe ha innoo horseedin “HJ-looy Muuse waa kaas”. Boqor Cismaanow distuurka Soomaliland ixtiraam oo dadka iyo dawladiisa ha u kala turjumin inaadeer. Xabaal iyo ninkeed u kala tag!,” ayuu qoraakiisa ku soo gabagabeeyay Cali Xasan Cismaan (Cali-Kubad).